mercredi, 01 mai 2019 14:34
Alemaina: 32 taona tsy niaina delestazy
Toy ny Angano sisa izany fahatapapatapahan-jiro na delestazy izany any Alemaina. Efa 32 taona izao tsy nisy delestazy tany an-toerana.
mercredi, 01 mai 2019 14:31
RN 12 Manakara: Niharan-doza ny fiaraben’ny BNGRC nitondra miaramila avy namboly hazo
Fambolen-kazo no nanamarika ny fankalazana ny Fetin’ny Asa androany 1 mey taty Manakara. Nanamaloka izany ny lozam-pifamoivoizana nitranga tamin’ny lalam-pirenena faha-12 tao Mijilo.
Niala bisikilety ny fiaraben’ny BNGRC nitondra miaramila avy namboly hazo tany Analavory, ka nivadika. Nisy ny namoy ny ainy, maro ny naratra tsaboina ao amin’ny hopitaliben’i Manakara.
mercredi, 01 mai 2019 14:30
Polisy – Antsiranana: Nodimandry teo amin’ny faha-63 taonany OPP-CE Barak Victoire
Polisy vavy niasa teto Antsiranana, akaiky ny Stade, ny «Officier Principal de Police de Classe Exceptionnelle» Barak Victoire. Tratry ny tsy fahasalamana izy, ary niakatra nitsabo tena teto Antananarivo, tao amin’ny hopitaly Girard et Robic na Hopitaly Miaramila Soavinandriana.
Tsy tana ny ainy na nanao ny ala nenina rehetra aza ny mpitsabo. Nodimandry ny 29 aprily 2019 tamin’ny 4ora tolakandro izy.
Teo amin’ny faha-63 taonany i Barak Victoire izao nodimandry izao. Manan-janaka efatra mianadahy izy, misy Polisy ihany koa ny zanany, ny sasany any an-dafy.
Hisy ny fanaovam-beloma sy fanomezam-boninahitra farany ao amin’ny EKAR Md Josefa Mahamasina amin’ny alahady alohan'ny fandevenana izay hotanterahina ao Ambohitrimanjaka.
mercredi, 01 mai 2019 11:55
CAN 2019: 20 500 Ariary ka hatramin’ny 533 000 Ariary ny saram-pidirana mijery ireo lalao any Egypta
Nampahafantarin’ny Federasionan’ny kitra egyptiana ny alatsinainy teo ny vidin’ny tapakila hijerena ireo lalao samihafa amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika, andiany faha-32, izay hotanterahina any an-toerana ny 21 jona hatramin’ny 19 jolay 2019.
Ahafahana ijerena lalao roa voalahatra hatao ao amin’ny kianja iray, ny tapakila iray. Ka ho an’ireo lalao tsy andraisan’i Egypta anjara dia 20 500 Ariary (5 euros), 61 500 Ariary (15 euros) ary 106 600 Ariary (26 euros) ny vidin’ny tapakila iray arakaraka ny toerana.
mercredi, 01 mai 2019 11:41
Banky Iraisam-pirenena: Hamatsy vola 392 tapitrisa dolara an’i Madagasikara
Hatokana an’ny fiahiana ara-tsosialy, indrindra ho fanohanana ireo fianakaviana marefo amin’ny alalan’ny « filet de sécurité social » ny 90 tapitrisa dolara, toy ny « Vatsin’Ankohonana » nosantarina tany amin’ny Distrikan’i Betafo – Vakinankaratra tamin’ny 2016.
Entina hanatsarana ny fahazoana misitraka ny herinaratra ny 150 tapitrisa dolara ho ana orinasa miisa 10 000, CSB miisa 500 ary malagasy mihoatran’ny 2 000 000 (500 000 avy amin’ny fanitarana ny tambazotra ary 1 500 000 avy amin’ny « kits solaires »).
Ho an’ny fandaharanasa ho an’ny fanamarinana fananan-tany ny 52 tapitrisa dolara.
Ary hanohanana tetikasa samihafa ny 100 tapitrisa dolara.
mercredi, 01 mai 2019 11:28
Fifidianana depiote: Hiendrika A4 ny lisi-pifidianana hampiasaina
Hiova endrika ny lisi-pifidianana hampiasaina amin’ny fifidianana solombavambahoaka hotanterahina amin’ny alatsinainy 27 mey 2019. Hihena ny velarany, tsy hitovy amin’ny valonana A3 toy ny nampiasaina tamin’ny fifidianana filoham-pirenena natao tamin’ny 2018 fa ho amin’ny endrika A4, toy ny taratasy mahazatra, no hampiasaina.
Nanamafy izany ny avy eo anivon’ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana na CENI.
Aty amin’ny CENI foibe ihany koa no hatonta ny lisi-pifidianana amin’ity, fa tsy ho eny anivon’ireo rantsamangaikany isaky ny Faritra toy ny teo aloha.
Tsy nahazoana fanazavana kosa na antony ara-bola na fitsitsiana no nitarika amin’io fanakelezana ny haben’ny lisi-pifidianana io.
Tsy mbola misy ihany koa ny fanazavana ara-teknika, fa raha tsy taratasy manokana (papier spécial) no hanaovana ny lisi-pifidianana A4, hoy ireo kandida depiote vitsivitsy nanontaniana, dia mety ho samy afaka hanota lisitra daholo ny besinimaro ka hiteraka ahiahy amin'ny fifidianana.
mercredi, 01 mai 2019 11:16
Mahazomà-Maevatanàna: Vehivavy bevohoka efa ho teraka nisy naka an-keriny
Tao amin’ny Fokontany Tanimbaritsara, Kaominina Mahazomà, Faritra Betsiboka no nitranga ity fakana ankeriny ity ny talata 30 aprily 2019 tokony ho tamin’ny 8ora alina.
Efa-dahy no voalaza fa nanatanteraka izao fakana an-keriny vehivavy bevohoka, manodidina telopolo taona efa miandry andro ho teraka izao.
Nametraka laharana finday ireo olon-dratsy taorian’ny nandehanany. Rehefa nantsoin’ny raim-pianakaviana io laharana io dia nisy nandray tokoa, ary « nilaza fa aty aminay ny vadinao », avy eo tsy tratr'antso intsony ilay finday.
Tsy mbola tafaverina eo anivon’ny fianakaviana ilay ramatoa, hatramin’ny maraina teo, nahazoana ny vaovao.
mercredi, 01 mai 2019 11:13
Fantatrao ve: Ohatrinona ny Tramway?
Ny antsoina hoe Tramway dia fitaterana andalamby antanan-dehibe. Izy io dia tsy mandeha mafy ary mifangaro amin'ny fifamoivoizana rehetra izy, na fiarakodia na mpandeha an-tongotra.
Manana ny lalany manokana kosa izy, ary izy mijanona stop sy manaraka ny lalàna fifamoivoizana. Izy kosa matetika no priorité amin'ny sampanana isan-karazany.
Mahazaka mpandeha maro izy, ary mijanona isaky ny arrêt rehetra amin'ny ora voatondro. tsy tara izy matetika satria dia azy irery ny lalana alehany.
Etiopia, firenena faran'izay osa indrindra maneran-tany izao no firenena voalohany taty Afrika manana usine de montage mihitsy fanamboarana Tramway.
Ohatrinona no vidiny?
Mitentina 470 millions de dollars ny vidiny nanamboarana azy hatramin'ny lalamby sy ny herinaratra manokana natokana ho azy (1 645 miliara ariary, ampahatelon'ny tetibolantsika manontolo).
mercredi, 01 mai 2019 09:38
Fitaterana: Ny orinasa Cotisse no hitantana ny tobim-piantsonana Maki Andohatapenaka
Manomboka izao dia ity orinasam-pitaterana tsy miankina ity no hitantana ny tobim-piantsonana Maki Andohatapenaka-Antananarivo.
Nitsidika ity tobim-piantsonana ity, ny 26 aprily 2019, ny Minisitry ny fitaterana sy Fizahantany ary ny Famantarana ny Toetrandro, Joël Randriamandrato, nijery ifotony ny zava-misy eny, sy ireo lafiny izay tokony hatsaraina, na eo amin'ny mpandeha na eo amin'ny mpitatitra.
Nambarany fa milamina amin’ny ankapobeny ny fitantanana sy fandrindrana ny tobim-piantsonana. Efa misy ny rafitra izay napetraka hiadiana amin’ny tsy fandriampahalemana, ny fisian’ny mpitandro filaminana sy ny “caméras de surveillance”.
mercredi, 01 mai 2019 09:26